गुगलमा ‘फटाहा’ सर्च गर्दा किन आउँछ प्रधानमन्त्री देउवाको नाम ? — KhabarTweet::Nepali online news portal गुगलमा ‘फटाहा’ सर्च गर्दा किन आउँछ प्रधानमन्त्री देउवाको नाम ? — KhabarTweet
काठमाडौं- प्रविधिको दिग्गज कम्पनी गुगल सर्च इन्जिनमा तपाईंले यति बेला नेपालको फटाहा अर्थात (Fataha of Nepal)भनेर सर्च गर्नु भयो भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नाम अगाडि आउँछ । देउवा अघिल्लो साता मात्रै सर्वोच्च अदालतको आदेशमा नेपालको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन् । देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको दुई दिन पश्चातबाटै गुगलमा ‘फटाहा इन नेपाल’ अथवा ‘फटाहा अफ नेपाल’ भनेर सर्च गर्दा उनको नाम र फोटो देखाउन थालेको हो । यसको कारण के हो त रु के गुगलमा देखिएको यस्तो घटना यो नै पहिलो घटना हो ?
कुनै समूहले चाहेर मात्र पनि हुने होइन । किन भने यसमा धेरै चरणहरू पार गर्नुपर्ने हुन्छ । यो प्रयोगकर्ताले के गरिरहेका छन् भन्ने विषयले निर्धारण हुने कुरा पनि पिचाईले बताएका थिए । टेकपानावाट